Iwu 10 nke Ntanetị Web nke Oge A | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 15, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Nkwurịta okwu bụ isi dị ka onye njikwa ngwaahịa na ụlọ ọrụ ngwanrọ. Na nso nso a, arụrụ m ọrụ ma bipụta “iwu” ndị a na - eweta n’iwu weebụ ọgbara ọhụrụ a ga-ekesara ndị otu anyị. Onye ọ bụla web web (ma ọ bụ ngwa) ọ bụla kwesịrị ịgbaso iwu iri ndị a.
Enwere fancy usoro mmemme enwere ike ịchụpụ maka ihe ndị a niile; agbanyeghị, ebum n’uche m bụ ka etinye ihe ndị a n’ebe ndị ọkachamara sọftụwia (na ọbụlagodi gị) nwere ike ịghọta.
Na-akwado 99% nke ndị ọrụ ịntanetị mgbe niile, n'agbanyeghị nchọgharị, mbipute ihe nchọgharị, ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ. Gbanwee ya ma kwadebe ya na beta releases.
Jiri XHTML zuru oke maka ngwa a, ntinye aka nke DTD na ihe nchọgharị na-akwado Cascading Style Sheets maka ụdị nhazi niile na onyonyo ngwa.
Na-ede ederede mgbe niile na eriri site na ihe ederede na-akwado agwa ọ bụla ma ghara ịchọ nwube.
Na-edepụta ụbọchị na oge niile na GMT nke na-enye onye ọrụ ọ bụla ohere ịgbanwe mmepụta ha chọrọ.
Na-ewu ihe mmekorita oge niile na atụmatụ ọ bụla.
Na-ewulite ụkpụrụ RFC mgbe niile (ozi ederede, email HTML, adreesị email, amaokwu ngalaba, wdg.)
Na-ewu modular mgbe niile. Ọ bụrụ na enwere karịa otu nhọrọ ebe ọ bụla na ngwa ahụ, ị ​​ga-enwerịrị ike ịgbakwunye karịa na-enweghị iwu ụlọ.
Ọ bụrụ na ihe karịrị otu akụkụ nke ngwa ahụ eme ya, akụkụ niile nke ngwa a ga-arụtụ aka n'otu isi okwu.
Ejila ihe ị nwere ike ịzụta wee gbanwee ngwa anyị iji kwado ihe ị zụtara.
Ọ bụrụ na ndị ọrụ nwere ike ime ya, mgbe ahụ anyị na-akwado ya. Ọ bụrụ na ha agaghị eme ya, anyị ga-akwado maka ya.
Feb 17, 2007 n’elekere 5:54 nke abali
Kwetara. Agbanyeghị na-adabere na isi asaa 7. ekwenyere m na ọbụlagodi na mmepe web, data, nnochi anya (GUI'S) na mgbagha azụmahịa ga-ekewapụ mgbe niile dabere na usoro MVC dabere.
Nke a ga-abawanye, ogo sọftụwia na scalability.
Feb 17, 2007 na 1:50 PM
Daalụ, Andreas! Nke ahụ bụ mmụọ nke # 7 - mgbasa ozi ị na - ekwu banyere ọtụtụ nghọta doro anya.